မေစစ်ပိုင်| November 10, 2012 | Hits:8,941
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment kyawmoe November 10, 2012 - 6:54 pm	ဆုတ်ပဲ့တဲ့ အကျင့်တွေနဲ့. ဒီမိုကရေစီ တူသလား တန်သလား ဗိုလ်ချူပ် ပြောခဲ့တယ် ရိုင်းတယ်လို့မထင်မိဘူး